Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguLisa
I-Camp Bluestone yindawo efanelekileyo yokuzonwabisa ngokukhuselekileyo kunye nosapho okanye abahlobo abasondeleyo. Ifakwe kwiihektare ezi-2 enendawo eninzi yokusasaza kwaye yonwabele amabala. Siyipropathi elungele inja, kodwa nciphisa inja enye kwikhabhini nganye.
Indawo ye-pavilion/i-BBQ inkulu ngokwaneleyo ukuba ingahlanganisana ngelixa usaziqhelanisa nentlalontle.
Unokwenza i-adventure emini, uphumle ebusuku. Yiza ufumane umoya omtsha, ingca eluhlaza, iimbono ezimangalisayo kunye nokutshona kwelanga okumangalisayo. Kufuphi nomzila wendlela, igalufa, kunye nokuloba.
ICamp Bluestone yindawo eyodwa yokurenta iholide eyenzelwe njengendawo yokuhlanganisana abantu. Ungarenta ikhabhinethi enye kwaye ube nendawo yokubaleka yothando naloo mntu ukhethekileyo okanye urente zonke iikhabhathi ezine kunye nosapho kunye nabahlobo kwaye usebenzise i-pavilion, indawo ye-BBQ kunye nomgodi womlilo ukuze uqokelele ukutya, imidlalo kunye nokubaliswa kwamabali kwasebusuku.
Ikhabhinethi yethu nganye iyingqayizivele kwisitayile kunye nendawo yokulala kodwa ilingana ngokukhululeka kunye nokulula.
Ikhabhinethi yakho inebhedi enkulu etofotofo yenkosi enelinen eziphezulu kunye negumbi lokuhlambela elikhulu elineshawari yokuhamba. Emva kosuku oluxakekileyo lokonwabela izinto ezintle zangaphandle zihlale kwiveranda kunye ne-cocktail kwaye ujabulele umbono omangalisayo weentaba ezingapheliyo. KwiCamp Bluestone ukubukela ukutshona kwelanga ngumsebenzi ngokwawo.
Ukuba ukhetha ukuphumla ngaphakathi, ikhabhathi yakho inekhitshi encinci enayo yonke into oyifunayo ukulungiselela ukutya ngokulula kunye nendawo yokuhlala etofotofo yokubeka iinyawo zakho phezulu kwaye uphumle.
Ungahlala kwisiza kwaye ukonwabele nje ubuhle bangaphandle, iindawo ezinokuthula eziluhlaza kunye nezandi zendalo. Okanye unokuthatha ithuba lakho konke ukukhwela intaba, ukukhwela ibhayisekile, ukukhwela iphenyane, ukukhwela inqanawa, ukuloba, igalufa kunye nokutyibiliza okukufutshane.
Siyimayile enye ukusuka kwiindlela zomzila wokukhwela intaba kunye nokukhwela ibhayisekile .
Indawo yase-Elk Mountain ski ingaphantsi kweemayile ezisi-8.
Kukho iikhosi zegalufa ezininzi ngaphakathi kweemayile ezili-10.
4.82 · Izimvo eziyi-111
ICamp Bluestone ikwindawo yasemaphandleni yeeNtaba ezingapheliyo.
Siya kufumaneka ngetekisi okanye umnxeba ukuphendula nayiphi na imibuzo onayo kwaye siya kubonelela ngeendawo ezintle zokutya kunye nezinto ezimnandi zokwenza kwindawo.